शा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ ! – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजनशा’री’रिक स’म्बन्धको विषयमा म’हिलाहरुले सो’च्छन् यस्तो अ’नौठो कुरा जानी राखौ !
April 26, 2021 admin मनोरंजन 13799
हाम्रो समाजमा अझै पनि यौ’नका कुरा खो’लेर गर्ने चलन छैन । त्यसैमाथि युवतीहरु त झन् यो कुरामा एकदम पछाडी नै छन् । एक अध्ययनका अनुसार हरेक यु’वती तथा महिलाले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उ’त्ताउलो खालको यौ’न अनुभव ग’र्न चा’हन्छन् ।र मौ’का पाउँदा उनीहरुले अ’नौठा अ’नौठा यौ’निक अ’भ्यासको प’रीक्षण समेत गर्न म’न प’राउँछन् । र यो पनि युवतीहरु विवाहपछि मोटाउनुको खास कारण यस्तो छ -दुव्लो भएका युवा युवती विवाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं ।अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानका अनुसार विवाह पछि थुप्रै महिला र पुरुषको तौल तेज रुपमा बढ्ने गर्दछ । यस्तै एक अन्य अनुसन्धानका अनुसार विवाहको ५ वर्ष्भित्र करिब ८२ प्रतिशत जोडीको तौल ५ देखि १० किलो बढ्ने गर्दछ ।विशेषज्ञका अनुसार तौल बढ्नुमा हाम्रो परिवर्तित जीवनशैली र बडी चेन्ज नै हो । विवाह पछिको परिवर्तित दैनिकी र जीवनशैलीका कारण शरिरमा थुप्रै हर्मोनल चेन्ज हुने गर्दछ ।
यो तौल बढाउनका लागि जिम्मेवार हुनसक्छ । यस्तै विवाह पछि व्यस्त समय तालिकाका कारण थुप्रै मानिसहरु पर्याप्त निदाउन पाउँदैनन् । अध्ययनका अनुसार दैनिक ७–८ घण्टा राम्रोसँग नसुत्दा शरिरको मेटाबोलिजम कम हुने गर्दछ जसले तौल बढ्ने गर्दछ ।विवाह पछि जीवनमा आएको परिवर्तनका कारण मानिसहरु तनावमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा भोक बढाउने हर्मोनको लेभल बढ्ने गर्दछ जसले तौल बढ्ने गर्दछ ।मानिसहरु विवाह पहिले राम्रो देखिनका लागि आफ्नो डाइट र फिटनेसमा पूरा ध्यान दिने गर्दछन् तर विवाह पछि जीवनशैलीमा परिवर्तन हुने भएका कारण यस्ता कुराहरु छुट्ने गर्दछ जसले तौल बढ्छ ।
एक्लै हुँदा आफूलाई फिट राख्नका लागि पर्याप्त समय निकाल्न सकिन्छ तर विवाह पछि प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ । मानिसहरु व्यायमको लागि समय निकाल्न सक्दैनन् । शारिरिक रुपमा निष्क्रिय हुने भएका कारण तौल बढ्ने गर्दछ ।आजकाल धेरैजसो मानिस २८–३० वर्षमा सेटल भएपछि विवाह गर्दछन् । जबकी अध्ययनका अनुसार ३० वर्षपछि हाम्रो शरिरको मेटाबोलिजमको रेट कम हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।विवाह पछि हनिमुन जाँदा बाहिरको खाना साधारण हुन्छ । यसका साथै धेरैजसो जोडी विकेन्ड र आउटिंग भन्दै बाहिर खाना खान रुचाउँछन् । यी हाइ क्यालोरी खाना तौल बढाउनको लागि जिम्मेवार हुन्छन् ।विवाह पछि आफन्तकोमा जानु पर्ने रितिरिवाज हुन्छ जहाँ धेरैजसो हेभी खाना हुने गर्दछ । धेरै जोडीको खाना खानको लागि निश्चित समय पनि हुँदैन । यसले तौल बढ्छ । हाम्रा अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्
February 5, 2021 admin मनोरंजन 8420
January 8, 2021 admin मनोरंजन 10775
January 4, 2021 admin मनोरंजन 5513